Fambara famantarana Neon LED an'ny LED
Neon Sign Company - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Neon Sign Company)
Ny biraon'ny sonia neon Custom dia mampiseho ny marika, marika, vokatra, serivisinao. Fahazavana haingo tsy manam-paharoa mba hisarihana ny sain'ny olona. Toetoetra Design: Business Loko: loko maro azo Refy: Custom Halavan'ny tariby mahazatra: 2m Plug-In: Eny
Jiro LED NEON SIGN Jiro
35.6 * 20 cm "EYE" jiro neon strip LED mifantoka amin'ny masonao, famirapiratana ary hafanana tahaka ny masonao. Ity takelaka neon LED ity dia manolo ny jiro birao mankaleo sy jiro alina tsotra manampy loko (fahafinaretana sy toe-po) amin'ny efitrano maizina indrindra. Izy io koa dia azo ampiasaina...
38.6 * Kactus neon tady famantarana cactus ho an'ny haingon-tranoo, ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, fivarotana, fisotroana sns. Famantarana neon mahafatifaty, miaraka amina endrika fano-sokatra, io no famantarana hazavana neon vaovao sy mahasarika maso. Miteraka famirapiratana, mafana sy mamy ao...
FANAMARIHAN'ANDRIAMANITRA NEON SIGN
"Ghost manidina" Home neon tady hazavana eo amin'ny rindrin'ny efitrano fandrianao. Misy jiro famantarana neon mamirapiratra hita manerana ny rindrinao, ny varavarankely na ny varavaranao. Izy io dia fomba azo antoka hanamboarana ny efitrano rehetra ho toerana mahafinaritra, mamirapiratra ny...
CARTOON NEON SIGN MAZAVA
83.8 * 80 sm LED neon strip sign. Tonga lafatra ho an'ny haingon-trano sy ny kanton'ny rindrina mba hamoronana ambiansy mahafinaritra sy velona ao amin'ny efitranonao, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, efitran'ankizy. Manampia zavatra manokana amin'ny habakabaka amin'ny hetsika toy ny...
AZA MAMONJY NEON SIGN
Famantarana neon Donald Duck sy Mickey Mouse , inona ny anjara sariitatra tianao? 93.7 * 100cm hazavana tariby LED neon, mari-pahaizana neon lehibe ho an'ny efitranonao, akaninjaza, fivarotam-boky, kianja filalaon'ny ankizy plaza sns. Loko maro azo atao, azonao atao ny misafidy loko sy habe samihafa...
CARTOON LED NEON SIGNS MAZAVA
Famantarana neon Donald Duck sy Mickey Mouse , inona ny anjara sariitatra tianao? 100 * 136 sm LED neon signage, jiro neon lehibe miorina amin'ny rindrin'ny efitranonao, akaninjaza, kianja filalaovana plaza, efitrano fanaovana sary miaina, sns. Ny tabilao jiro neon sign cartoon dia mety ho fanao amin'ny...
HEART LED NEON FAMARIHANA
58.8 * 50 sm "neon Pink & Red" LED neon ho an'ny fampakaram-bady mamy, efitrano fatorianao mafana. Manazava ny varavarankelyo, ny efitranon'ny zazavavy na ny efitranon'ny zaza amin'ity Neon Style Valentine's Heart Heart LED Wall Light ity! Tsara ho an'ny andron'ny mpifankatia...
TAKELAKA MAIMAIMPOANA NEON SIGN LOGO SIGNAGE
LEE SIGNAGE ho an'ireo mpaninjara fanangonana LEE, magazay, kianja filalaovana. Ny sary namboarina manokana dia nahitana litera sy lamina. Ataovy hazavana ny sary famantarana anao, be mpampiasa amin'ny dokam-barotra marika izy io. Fametrahana mora sy fanovana habaka raikitra. Mampiasà LED ho loharano maivana,...
LED ORINASA NEON SIGN LOGO
SIGNAGE ORINASA ho an'ny mpizara sy fivarotana LV. Loko tokana sy maro loko, tsy ny sary famantarana ihany koa ny dokambarotra amin'ny seranam-piaramanidina sy fivarotana. Ny sary namboarina manokana dia misy litera sy lamina. 100 * 100 cm takelaka famantarana logo LED ho an'ny orinasa sy dokam-barotra....
ANGEL WINGS 2 LED SIGNAGE TSY MISY TSY MISY
Toerana malaza tian'ny mpitsidika rehetra haka sary. Ny ivon'ny sehatra, mahazoa ny masonao. Azonao atao koa ny mametraka ny mari-pamantarana neon anao hanaovana doka. Ity zavakanto ity dia noforonina tamin'ny jiro neon miloko marevaka izay miendrika drafitra elatry ny anjely manidina. Mora ampiasaina izy...
WALL MOUNTED NEON SIGN HO AN'NY FITANDREMANA
Tapakila neon LED 50 * 50 ravina napetraka eo amin'ny rindrin'ny efitranonao sy ny efitranon'ny ankizy. Azontsika atao ny mamadika ny litera, biby, zavamaniry, voankazo na logo ho marika neon, amin'izay tianao. Ny fambara neon LED fanao dia ny jiro jiro tonga lafatra ho an'ny tranonao, birao, bara,...
105 * 40 sm "Cheers" Custom neon sign dia ny jiro tonga lafatra amin'ny haingon-trano, azonao ampiasaina amin'ny efitranonao ianao. Taratasy hazavana LED Taratasy tariby LED manokana. Takelaka famantarana LED. Famantarana hazavana neon LED. Tianay ny mamorona famantarana LED neon namboarina ho anao!...
PAC MAN dia lalao arcade am aze arcade novolavolaina ary navoakan'i Namco tamin'ny 1980. Faha-40 taona ny 2020, ka 80th na 90 ianao no nilalao ity lalao ity? Anjaran'ny lalao mahafatifaty, mbola malaza eran'izao tontolo izao mandraka androany. Jiro tariby LED neon mareva-doko, azonao apetaka eo...
PAC MAN dia lalao arcade am aze novolavolaina ary navoakan'i Namco tamin'ny 1980. Faha-40 taona ny 2020, ka 80th na 90 ianao no nilalao ity lalao ity? Anjaran'ny lalao mahafatifaty, mbola malaza eran'izao tontolo izao mandraka androany. Jiro tariby LED neon miloko, azonao apetaka eo ambonin'ny...
11,6 * 20cm mananasy taratra neon LED haingo ho an'ny haingo an-trano, jiro amin'ny alina nitaingina ny rindrin'ny efitranon'ny ankizy na nijoro teo ambonin'ny latabatry ny efitrano. Voankazo, legioma, zavamaniry, hazavana neon maro azo, ary koa habe sy loko isan-karazany. Haingo mahafatifaty sy...
Afangaro ny hazavana tady neon-tsika amin'ny fomba sy lohahevitra hafa hamoronana ny fampisehoana anao manokana ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany. Na minimalista ianao na aleonao ny fomba ankehitriny amin'ny famolavolana, tsy misy antony tokony hahadisoanao ny hazavan'ny rindrin'ny LED neon...
DECORATION TRANO NEON FISAORANA
"Ankafizo ny tenanao " 48.9 * rindrina milanja 100 cm nitaingina LED ho an'ny efitrano fandriana, efitrano zaza, varavarankely sambo, klioba, fampakaram-bady, fety sns. Izy io koa dia prop tsara ho an'ny sary. Ireo jiro tsara tarehy ireo dia hitondra anao mahafinaritra kokoa amin'ny fiainanao....
BAT MAZAVA LED NEON SIGN
Ramana amin'ny rindrina. Rindrina LED 100 * 32cm mitaingina jiro haingon-trano neon, jiro alina ao an-tranonao. Io no fanomezana tsara indrindra ho an'ny orinasa na fianakaviana, loko tokana 12 misy. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hazavana RGB neon strip izay azo fehezin'ny mpanara-maso lavitra, koa...
LED GHOST NEON SIGN
50 * 50,4 cm "matoatoa mahafatifaty" hazavana neon fanao. Famantarana / hazavana LED neon dia vita amin'ny fantsom-pandrosoana silika malefaka miaraka amin'ny jiro LED malefaka toa ny fambara fantsom-boasary fitaratra neon. Ny mari-pamantarana neon LED malefaka dia azo antoka (malefaka ambany, DC...
MAZAVA FANASININANA ALIEN NEON
50 * 47 cm takelaka famantarana neon LED. Jiro neon vahiny sy sambon-danitra no manazava ny tranonao, ampio tantaram-pitiavana miaraka amin'ny marika neon mavokely sy mena ho an'ny haingon-trano. manolotra ambiansy tantaram-pitiavana ao amin'ny efitranonao, mety tsara amin'ny zanakavavinao kely sy...
Fampahalalana momba ny vokatra Safe: malefaka ambany (12V adaptatera / misy herinaratra tafiditra) mamela azy io hampiasaina na dia amin'ny ankizy aza Controller tafiditra ao, raha RGB na IC LED neon strip hazavana Tsy marefo: tsy toy ny fantsom-boasary neon fitaratra, maharitra ny teknolojia LED Tady herinaratra:...
FIANAKAVIANA PEGGY NEON SIGN
Ny fianakavian'i Peggy. "Kisoa peppa aho" famantarana famantarana LED ho an'ny efitrano fandriam-bahiny, toerana mafana sy mamy, sitraky ny ankizy, faly koa ny ray aman-dreny. Hazavana tady neon 135 * 100cm, famantarana haingon-tsary ho an'ny trano, efitrano fandriana, akanin-jaza, sns. Maro ny...
LED PEGGY MAZAVA NEON
Kisoa Peppa an'ny ankizy, kisoa Peppa an'ny ray aman-dreny, kisoa Peppa eran-tany. Mpankafy kisoa Peppa daholo isika. Tsy ny kisoa Peppa ihany, fa misy kintana sarimiaina marobe. Ary koa kintan'ny sarimihetsika toy ny Iron man, bat man, sns. Lazao anay fotsiny hoe inona no tianao ary mandefasa antsipiriany...
SPORT BRAND NEON SOGN LOGO
MERA AUTOMOTIVE LOGO NEON SIGN
Jiro NEON STORE MANOKOA JIOLY FAMONJENA
Sarin'ny COCA COLA LED NEON SIGN
Neon Sign Company Neon Sign Say Neon Sign Shop Neon Signs anatiny Neon Signs manokana Neon Sign ny jiro Neon Sign Decor Neon Sign Art